जातीय सदभाव र राष्ट्रिय एकताको लागि संघीयताको मुद्दालाई स्थगित गरौं । – Hello Punarwas
जातीय सदभाव र राष्ट्रिय एकताको लागि संघीयताको मुद्दालाई स्थगित गरौं ।
On २० फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ११:२९
संघीय प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा असहमत पक्षबाट चर्काइरहेको पछिल्लो अराजक आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक संघसंस्था लगायत देशको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरु ठप्प भइदिनाले जनता अभावको तीतो चाख्न बाध्य छन् । गत भदौं सात गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहटको नाममा चर्केको हिंसात्मक घटनाले संघीय नेपाल निर्माण अभियानमा गहिरो ठेस लागेको छ । सीमाङ्कन लगायत अन्य थुप्रै मागहरु राखी गरिएको मधेस आन्दोलनले पाँच दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारी तथा केही सुरक्षाकर्मीहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । मधेस आन्दोलनको निहुँ पारेर भारतले नाकाबन्दी गर्दा अस्पतालमा औषधि नपाएर बिरामीहरु अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
यसरी माथिको समस्याको जड संघीयता नै देखिन्छ । त्यसैले अब बहस गर्ने बेला आइसकेको छ, संघीयता किन र कसका लागि ? के हाम्रो जस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक छ ? संघीयता हाम्रो आवश्यक्ता कि कसैको लहैलहैमा ल्याइएको वा कसैको अभीष्ट पूर्तीका लागि जबर्जस्ती थोपरिएको हो ? अखण्ड सुदूरपश्चिम चाहनेहरुको माग पूरा गर्दा थरुहट र मधेसीको आन्दोलन चर्कने तथा थरुहट र मधेसीको माग सम्बोधन गर्दा अखण्ड सुदूरपश्चिम, चुरेभावर एकता समाज लगायतका शक्तिहरुले आन्दोलन गर्ने कुरा बताइरहेका छन् । यसबाट देशमा संघीयता हाललाई थाँती राखेर देश निर्माणको दिशामा सरकार र जनता अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । कुनै राज्य व्यवस्थाको अभीष्ट भनेको जनतालाई मौलिक हकहरु बहाली गरी शान्ति र र सुव्यवस्था सहितको सुशासन प्रदान गर्नु हो । जसमा जनताको सर्वाेपरी जसमा जनताको हीतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर वर्तमानमा ल्याइएको संघीयताले देशभित्र जातीय सद्भाव खल्बल्याउन सक्ने र देशलाई विखण्डनतिर लैजान सक्ने थुप्रै झलकहरु देखिएका छन् । गत भदौमा भएको टीकापुरको घटना र अस्ती मात्र इटहरीमा मधेसी मोर्चाको कार्यक्रम स्थलमा स्थानीय युवाहरुले आगो लगाएको घटनाले क्रमशः उग्र रुप लिदै जातीय सद्भाव खल्बलिने त हैन ? भन्ने ठूलो आशंका जन्माएको छ । त्यसैगरी तराइमा सिकेलाल जस्ता नेता भनाउदाहरुले नेपालबाट तराइ क्षेत्र अलग गर्नु पर्ने विचार सार्वजनिक स्थलहरुमा दिइरहेको वर्तमान अवस्थामा संघीयताको मुद्दा अगाडि बढाउदा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्न पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संघीयताको मुद्दालाई तत्काल स्थगित गर्दा देशको हीत हुने देखिन्छ । जातीय सद्भाव उभ्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
कुनै वाद, विचार र सिद्धान्त भन्दा देश सर्वथा ठूलो हो । देश विखण्डन हुने र वर्वाद हुने अवस्थामा अन्य वाद, विचार र सिद्धान्तलाई एकातिर पन्छाएर देश रक्षा गर्नतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुन नितान्त जरुरी छ ।
नव वर्ष र नेपाली संस्कृति